China Upvc 45 ° Elbow Fitting Mould fekitari uye bhizimisi | Longxin
Muenzaniso: PVC 45 ° flaring die
Q1: Iwe uri kambani yekutengesa kana inogadzira?
A: Tiri fekitori.
Q2: ndinosvika sei kufekitori yako?
A: Unogona kuuya kuguta redu nendege, bhazi kana chitima.Zvinotora maawa maviri kuti ubhururuke kubva kuGuangzhou kuenda kuguta redu.Zvinotora maawa 3.5 kuti usvike kuguta redu kubva kuShanghai nechitima.Ingori awa nechitima kubva kuNingbo kuenda guta redu.
Q3: Ndeipi iko kudzora kwemhando mufekitori yako?
A: Tinotenda kuti "mhando iri pamusoro pezvose". Tine timu yehunyanzvi yekudzora mhando. Yedu mhando yekudzora timu inonyanya kuita anotevera matanho:
A: Dhizaini optimization kudzora B: kuomarara kuongorora kweforoma simbi C: pombi yakakodzera muforoma gungano kuongororaD: Mould test bvunzo uye muyedzo kuongororwa kwepombi kukodzera E: yekupedzisira kuongorora kweforoma uye pasuru isati yatumirwa. Kana uine chero mimwe mibvunzo, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu seinotevera:
Q5: Ndeapi mazwi ako ekubhadhara?
A: Na t / T, L / C, garandi yekutengeserana uye Western Union.
Q6: Inguvai yako yekutakura nguva yekuumbwa?
A: Mushure mekudhirowa muforoma, zvinotora mavhiki masere kusvika gumi nemasere kugadzira chakuvhuvhu, zvinoenderana neyakaumbwa chimiro uye huwandu hwemakomba (asina kuroorwa kana akawanda). Dhirivhari zuva richaverengerwa kubva pazuva raunotendera muforoma kudhirowa. Mushure mekusimbisa mhedzisiro yedu yekupedzisira, tinogona kukutumira iyo pulasitiki muforoma mukati mevhiki rimwe.
Pashure: PVC Elbow Pipe Fitting Mould
Zvadaro: UPVC Yee Tee Pipe Fitting Mould
PPR Elbow Pipe Inokodzera Mould